T20I series between Afghanistan and Zimbabwe cancelled due to COVID-19 - Cricket News
T20I series between Afghanistan and Zimbabwe cancelled due to COVID-19
The COVID-19 pandemic continues its impact on international cricket and now host Zimbabwe has cancelled the upcoming five-match T20 international series against Afghanistan on Saturday. The T20 series was scheduled to be held in August and Zimbabwe Cricket had asked its government’s permission to host the series in a controlled environment but the ‘Sports and Recreation’ Commission suggested that the country’s sudden rise of COVID-19 cases results in the team still not ready to host teams.
Zimbabwe Cricket tweeted that they have canceled a five-match T20 International series against Afghanistan which was to be played in Harare in August as the government advised that the country (Afghanistan) would be touring due to rising cases of COVID-19 and are not ready to host teams.
India also had to play a three-match ODI series with Zimbabwe in August, but this series also fell to COVID-19 pandemic. Cricket Australia has also canceled the three-match ODI series with Zimbabwe in August. The series was to be played in Australia.